Tünektepe Teleferik ayaa 2019 oo qof gaysay shirkii 500 | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean07 AntalyaTelefishanka Tünektepe Teleferik wuxuu geeyey 2019 oo kun oo qof shirwaynihii 500
02 / 01 / 2020 07 Antalya, Coast Mediterranean, GUUD, Gondola, Headline, TURKEY, TELPHER
Sannadkii sannadka xadhigga loo yaqaan 'tunektepepepepepepe' wuxuu qaaday kun qof shirkii
Antalya Metropolitan District ANET A.Ş. Xarunta Tünektepe Teleferik Facility, Sarısu iyo Meelaha madaddaalada Topçam, Kadınlar Plajı iyo Zıp Zıp Park, oo ay ka hawlgali jireen shirkadda 'ıalık Holding', ayaa jabiyey diiwaanka booqdaha ee sannadka 2019. In ka badan 2 milyan oo qof ayaa booqdey xarumahaas inta sanadka lagu jiray.
Antalya shirkeedii 605-sare ee Tünektepe Cable Car iyo Xarunta Bulshada, xagaaga iyo jiilaalka ayaa martigelisay martida. Tünektepe Teleferik, oo sidoo kale ah mid ay aad u jecel yihiin dadka dalxiiseyaasha gudaha iyo shisheeyaha ah ee yimid magaalada, ayaa 2019 kun oo qof u soo qaaday shirweynaha 500. Martida ayaa daawatay muuqaalka aan la arki karin ee Antalya ee ka socda Tünektepe, halkaas oo ay ku raaceen baabuur koronto ah. Teleferik Café, oo ku dhexyaal xarunta, ayaa martigelisay martidooda dhadhankeeda gaarka ah iyo aragtidooda gaarka ah.
KU SOO DHAWAADA MILLION PICNIC MEETERS
ANET A.Ş. oo ay ku shaqeeyaan dabeecadda, badda, cagaarka iyo adeegga raaxada oo leh qurux qurux badan oo aagga taraafikada ah oo buux dhaafiyey ballan-qaadyada Sarısu iyo Topçam. Guud ahaan 1 milyan 125 kun oo qof ayaa booqdey labadaas goobood oo dadka laga wacdiyo sanadka gudihiisa. Goobta Madadaalada ee Sarısu 950 kun, Meelaha Madadaalada Topçam waxaa u adeegayay 175 kun oo qof. Muwaadiniinta qoysaskooda waxay ku raaxeysteen digaaga iyo hilibka dubitaanka, waxay galeen badda.
Turkey ayaa ugu weyn park theme indoor ahaa dhibic kulanka loogu talagalay carruurta oo dhan pogo sanadka pogo Park a. Zıp Zıp Park wuxuu martigaliyay 2019 kun oo marti sharaf ah sanadka 180. Caruurtu waxay ku madadaalin jireen garoonnada ciyaarta.
RIIX SI AAD UGU RAADISO TILMAAMAHA IYO Muuqaalka TOPHANE
Beerta Kaleici Tophane Shaaha, oo bixisa fursad lagu daawado aragtida aan la arki karin ee taariikhi ah ee Kaleici, Badda Midigta ah ee Badda Mediterranean-ka iyo Beydaglari, ayaa sidoo kale sanadkan martigelisay 300 oo qof. Martida maxalliga ah iyo kuwa shisheeyahaba waxay shaah kafeeyeen shaahkoodii waxayna daawadeen muuqaalka aan la qaadan karin ee Kalaiii iyo badda ka socota Tophane
DIYAAR GUDAHA DUMARKA EE DUMARKA
Shirkadda Dawladda Hoose ee Magaalooyinka ANET AŞ. oo ay maamusho Xeebta Haweenka ee xilliga xagaaga, 75 kun oo haween ah ayaa madadaaliyay. Xarunta, oo u shaqeysa aag Madaddaalo ee Sarısu, ayaa noqotay goob ay ku kulmaan kumanaan haween ah oo maxalli ah iyo ajaanib ah inta lagu jiro maalmaha xagaaga kulul. Makhaayadda waxaa ka mid ah makhaayad, makhaayad cunto fudud, patisserie, qubeys turkey, garoon lagu ciyaaro, waddo loogu talagalay muwaadiniinta naafada ah iyo xeebta lacag la’aanta ah.
Sarısu iyo Topçam aaggogmada
Tünektepe Fursadaha Baabuurta